Ngokuvamile, abanikazi bezinja ezinkulu nezinhlobo eziphakathi, njengeCaucasian, Asia Ephakathi, abelusi baseJalimane, izinhlamvu zabo nabanye, kudingeka badale isakhiwo esinjalo. Kuziphi izimo okudingekayo ukuba ube nokuvalwa kwesayithi? Okokuqala, yiqiniso, uma inja imkhulu kakhulu ukuze ikwazi ukuyigcina ekhaya. Uma kwenzeka isilwane sisuka ngokukhululekile kusayithi, igumbi elimboziwe liba yindawo yokuphumula, ingafihla esimweni sezulu bese kubanda. Ukwakhiwa okuwusizo, uma endlini noma esakhiweni ngokuvamile kukhona abantu abangabazi, njengezivakashi, noma ukulungiswa. Futhi ekugcineni, uma inja encane noma ephakathi igcinwa endlini, ke, ukuze ihlale ngaphandle, kungukuzivocavoca okuncane ngaphandle kokulawula kwakho ngqo, futhi, i-aviary yenja nayo iyasiza. Uyakwenza kwenzeke ngezandla zakho? Ngokuvamile, yebo. Yiqiniso, amanye amakhono, amathuluzi nezinto zokwakha kuzodingeka. Kuzokuthatha isikhashana, kodwa ekugcineni uzothola ikamelo elikhululekile ukuhlukanisa inja. Ngeke nje idalwe ngqo ngesilwane sakho, ngokucabangela izici zayo, kepha futhi ucabangele izici zesayithi lakho.
Indlela yokwenza i-aviary ngenja ngezandla zakho: imidwebo nokulungiselela
Ngaphambi kokuba uqale ukufuna, ukhetha, ukuthenga izinto, izinto zokudla kanye namathuluzi, udinga ukunquma ngezinto ezibalulekile. Kudingeka ukuthola indawo engcono kakhulu indawo yendawo evulekile. Cabangela ukucushwa kwesayithi, uhlobo lomhlabathi kuso. Kumele ucabange ukuthi ufuna ukubekaphi isilwane ukuze sikwazi ukwenza imisebenzi yayo yokuzivikela. Kulesi simo, isakhiwo akufanele siqhubeke endleleni yakho eya egaraji, izakhiwo zezomnotho.
Njengoba uzimisele wonke amaphuzu angenhla, ungaqala ukudala imidwebo. I-enclosure ejwayelekile eyenziwe i-rectangular, Nokho, njengoba sekushiwo kakade, udinga ukucabangela ukuma kwesayithi lakho. Manje kancane mayelana nosayizi. Zibalwa ngesisekelo senani lezinja, ukukhula kwazo. Ngesilwane kuze kufike ku-50 cm ukuphakama, indawo okungenani imitha eyisithupha iyadingeka, uma inja 50 ukuya ku-65 cm ephezulu ingenani imitha ayisishiyagalombili, inja ephakeme ngaphezu kuka-65 cm idinga okungenani imitha eyishumi yokwakhiwa. Uma une-bitch enezinkukhu, noma inja eyodwa endala - indawo yanda izikhathi eziphindwe izikhathi nesigamu. Isibonelo, i-enclosure yomalusi waseJalimane iyoba nengxenye okungenani 8 m 2 . Njengoba inja ikhula ngokuvumelana nesilinganiso kuyinto 0.6-0.65 m, le bitch kuyinto 0.55-0.6 m. Ukuphakama kwesakhiwo kumele kube ukuthi isilwane angakwazi ukuma emilenzeni yayo yangemuva, futhi akufanele uthinte ikhanda nophahla.
Yini okufanele ibe segumbini, futhi kufanele ihlelwe kanjani? Uma umklamo uzosebenza nje ngokuhamba kwenja, bese wenza inguqulo elula, eqinisweni, kuphela ucingo oluhlanganisiwe noma ngisho ngokuphelele ngaphandle kophahla. Uma wenza, isibonelo, i-cage evulekile yomalusi, isakhiwo kufanele sibe nezinxenye ezichazwe ngezansi. Udinga idokodo ngenja. Kumelwe kube nesiteji esithatha cishe u- 2/3 ekamelweni, ingxenye yesigceme isabelwe ingxenye ebusika. Izoqukatha idokodo. Izindonga zengxenye ebusika zenziwe izithulu. Amasango kufanele avule ngaphakathi. Uma kusho ukuthi umnikazi uzoshiya, futhi ukondla inja kulapho engaziwa, yenza i-bird feeder eyakhelwe ngaphakathi.
Ukuze udale i-aviary yenja ngezandla zakho, uzodinga lokhu okulandelayo.
Ngodonga lwezingxenye zebusika, izingxenye zamapulangwe , nanoma yiziphi ezinye izinto, eziphephile izinja.
Kulo mnyango ovulekile wezingxenye ezivaliwe - amaphrofayli wephrofayili yensimbi. Inetha ayikhuthazwa ukusebenzisa, njengoba inja ingalimaza ama-paws, ikhuphuke kuyo, futhi kunengozi ukuthi imifino izogoba futhi ngokushesha noma ngokuhamba kwesikhathi iyophula ngaphansi kwesisindo sesilwane.
Ukuze uphahla - i-ondulin, i-soft, noma i-metal, i-slate. Qaphela ukuthi uphahla lwensimbi ngesikhathi semvula noma isichotho kuveza umsindo omkhulu.
Ngaphansi, isiteji kumele sibe yokhuni. Uma wenza phansi ukhonkolo, kufanele uhlanganiswe nge-flooring kusuka ebhodini, uphathwa ngokubunjwa okhethekile ukuvikela ukubola.
Ukugcizelela izingxenye zokhuni kuyenziwa ngosizo lwezikulubovu, ukudonsa, ukuxhuma ukuxhuma.
Kungenzeka ukuthi wenze i-aviary ngenja ngezandla zabo, njengoba sesibonile kakade. Yisebenzise, uthi, amasonto ambalwa noma ngenyanga, kodwa ngenxa yalokho, ikhwalithi yekhwalithi izosiza isilwane sakho njengekhaya noma indawo yokuhamba iminyaka eminingi.